July 5, 2021 - ApannPyay Media
July 5, 2021 by ApannPyay Media
ဆံပင်ကျွတ်တာကိုရပ်တန့်စေတဲ့အပြင် ဆံပင်ဖြူတာပါကာကွယ်ပေးတဲ့ ဇီးဖြူသီး ဒီကနေ့ခေတ်မှာ ဆံကေသာနဲ့ပတ်သတ်လို့ အဓိကရင်ဆိုင်နေရတာကတော့ ဆံပင်ကျွတ်တာ၊ ဗောက်ထတာနဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် ဆံပင်တွေဖြူလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အလှကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဝယ်သုံးပေမဲ့ တချို့ဗောက်ပျေက်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ဆို ဆံပင်ကျွတ်တာ ဆံပင်ကျွတ်တာရပ်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ဗောက်ထတာ အဆီပြန်တာတွေဖြစ်လို့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းရှာရခက်ခက်ပါပဲ။ အိန္ဒိယဇီးဖြူသီးကဆံပင်ကျွတ်တာကိုရပ်တန့်စေတဲ့အပြင် ဆံကေသာကို သန်စွမ်းစေပါတယ်။ ဗောက်ပျောက်ရုံသာမက ဆံပင်ဖြူတာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးလို့ အကောင်းမွန်ဆုံး ဆံပင်ပေါင်းတင်ဆေးပါပဲ။ ပါဝင်ပစ္စည်း ဇီးဖြူသီးမှုန့် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ပဲနံ့သာရွက် မှုန့် (Fen u g ree k P o wde r) စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ပျဉ်တော်သိမ်ရွက် … Read more
ဝပြီး ဗိုက်စူသူများအတွက် သင်္ဘောသီးဓာတ်စာ
ဝပြီး ဗိုက်စူသူများအတွက် သင်္ဘောသီးဓာတ်စာ ဝလာသူများတွင် ဝခြင်း အကြောင်းအရင်း နှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမ တစ်မျိုးမှာ အဆီတိုးပြီး မျိုးရိုးအလိုက် ဝသူမျိုးဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးမှာ အသက် ၄ဝ ကျော် ၅ဝ တွင် ရောက်မှ ဝလာသူ (လေဝဟု ခေါ်သည်) များဖြစ်သည်။ မျိုးရိုးအလိုက်ဝသူ၊ အဆီတိုး၍ ဝသူများမှာ ကိုလက်စထရော တက်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ကောင်းသော ကိုလက်စထရော (HDL Cholesterol) များလျှင် ဝသော်လည်း ကျန်းမာပြီး သွားနိုင်၊ စားနိုင်၊ ဝမ်းမှန်၊ အိပ်ပျော် နေကောင်း နေပေသည်။အသက်ကြီးမှ ဝလာသူများမှာ ကျန်းမာရေး ချူချာတတ်သည်။ မျက်နှာနှင့် လက်ချောင်းများတွင် မဝပဲ ဗိုက်စူ ထွက်လာသဖြင့် ဝလို့လှလို့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ လမ်းလျှောက် နည်းပြီး အထိုင်များလျှင် … Read more
ပိုက်ဆံငါးသောင်းလှုလို့ ဝမ်းသာပြီးထိုင်ကန်တော့ရှာတဲ့ ဆိုက်ကားဆရာအဘိုး (ရုပ်သံ) ပြည်သူတွေအားလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေထဲမှာ အဆိုးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးကြပ်တည်းမှုတွေကြောင့် စားဝတ်နေရေးပြဿနာတွေကလည်း အများအပြားပါပဲ လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အချင်းချင်း လက်လှမ်းမှီ တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းမှုတွေ အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ကာ ဖေးမကူညီနေကြပေမယ့် လိုအပ်မှုတွေများစွာရှိနေသလို သက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားတွေအတွက်လည်း အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေကြပါတယ်.. ပိုက်ဆံငါးသောင်းလှုလို့ထိုင်ကန်တော့တာတဲ့ဆိုက်ကားဆရာအဘက အဘကအသက်၆၅နှစ်ရှိနေပေမယ့် ဝမ်းရေးကြောင့်ဆိုက် ကားနင်းပြီးပိုက်ဆံရှာရပါတယ်။အရင်ရက်တွေကအဘနေမကောင်းဖြစ်နေတာတဲ့ ဒီနေ့မှဆိုက်ကားနင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ အဘကိုငါးသောင်းကျပ်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။အလှုရှင်ဦးသန်လှစိန် + ဒေါ်ဝင်းသမီး မပပဝင်းနှင့် မောင်နှမများဖြစ်ပါတယ်။အဘခဗျာငွေငါးသောင်းရလို့အရမ်းဝမ်းသာပြီးထိုင်ကန်တော့နေလို့ မနည်းတားခဲ့ရပါတယ် ONE TO ONEကလေးလူနာကူညီရေး ကိုဝမ်း စိုင်းနေမျိုးမောင်မောင်09765765179 ၊ မန္တလေးမြို့ ကအဖိုးအကြောင်းကို ပြောပြထားသလို ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့အဖိုးအဖွားတွေအတွက် လှူဒါန်းချင်တဲ့ စေတနာရှင်တွေအတွက်လည်း လှူဒါန်းနိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ် ပိုက္ဆံငါးေသာင္းလႈလို႔ ဝမ္းသာၿပီးထိုင္ကန္ေတာ့ရွာတဲ့ ဆိုက္ကားဆရာအဘိုး (႐ုပ္သံ) ျပည္သူေတြအားလုံး ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ … Read more
ဝက်ခြံ တင်းတိတ် အမာရွတ်နဲ့ အဆီဖုတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရရင် Hello မလှချင်တို့ရေ ဒီကမလှချင်နဲ့ အတူတူ လိုက်လုပ်ရအောင် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ပီးရင် အတူတူလှကြတာပေါ​့ It’s skin care time!!! ဒီတစ်ပတ်တော့ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တင်းတိပ်တွေ ထွက်နေတယ် ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ရှိနေတယ် အဆီဖုတွေ ဖြစ်နေတယ် အမဲစက်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေ ရတယ် ဘာလုပ်ရမလဲ??? အကြံဉာဏ်ပေးပါဦး တင်ပေးပါဦး ဆိုသူတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အကုန် အကျသက်သာတဲ့ သဘာဝအိမ်တွင်းနီးလေးကို ယူဆောင်လာပါပြီ….ဒါကတော့ Potato Mask (အာလူးနဲ့ မျက်နှာပေါင်းခြင်း) ပါပဲ ပါဝင်ပစ္စည်းက အာလူးတစ်မျိုးတည်းလား ? Yes – အာလူးတစ်မျိုးတည်းပါပဲ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုပြီးထိရောက်စေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတော့ ရှိတာပေါ့ … Read more
မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ကင်းဖို့ဆိုရင်
မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ကင်းဖို့ဆိုရင် မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံနဲ့ အရေးကြောင်းတွေပျောက်ကင်းဖို့ အုန်းဆီ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတို့နဲ့ နေ့တိုင်းမျက်နှာသစ်မယ် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဟာ အသားအရေ စိုပြေလှပဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာထက် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ သဘာဝမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာကိုပြုလုပ်လိုက်ရအောင်ပါ။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာ အသားအရေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများပြီး သဘာဝပစ္စည်းတွေမို့ အရေပြားပျက်စီးမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ဝက်ခြံ၊ မျက်နှာမှာ အနီစက်ဖြစ်တာ ၊ အမာရွတ်တွေနဲ့ အရေးကြောင်းတွေအပါအဝင် ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အုန်းဆီ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ သင့်အသားအရေအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အသားအရေက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အသားအရေ (Sensitive Skin) ဆိုရင် အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ၂ … Read more
အသည်းကို ပြန်လည်နုပျိုစေမယ့် အစားအစာ ၇ မျိုး
အသည်းကို ပြန်လည်နုပျိုစေမယ့် အစားအစာ ၇ မျိုး အသည်းအဆီဖုံးတာနဲ့ပတ်သတ်လို့ အမျိုးအစား ၂ မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ အရက်သောက်တာများလို့ အသည်းအဆီဖုံးတာနဲ့ အရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အသည်းအဆီဖုံးတာပါ။ အများအားဖြင့် အနောက်တိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များကြပါတယ်။ အသည်းမှာအဆီတွေ စုလာတာကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ။ အသည်းဟာ ခန္တာကိုယ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာပါဝင်လို့ အသည်းကို ပြန်လည်သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသည်းကို သဘာဝအတိုင်း သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး ခန္တာကိုယ်အတွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်း ဂျင်းမှာ အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီး ခန္တာကိုယအတွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ Antioxidant တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုသန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဂျင်းကို ရေနွေးနဲ့စိမ်ပြီးပုံမှန်သောက်ပေးခြင်းဖြင့် အသည်းကို ကျန်းမာစေပါတယ်။ ကန်ဇွန်းဥ ကန်ဇွန်းဥဟာဆိုရင်လည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး အသည်းကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ … Read more
အနံ့မရတဲ့သူတွေအတွက် မျှဝေပေးချင်တယ်နော် ရေတည်ပီး ကြက်သွန်ဂျင်း စနွန်းမှုန့်vinegarပါထည့် နောက်ဆုံးမှကွမ်းရွက်ထည့် ခွက်ဖစ်ဖစ်အိုးဖစ်ဖစ် ထည့်ပီ အငွေ့ရျူ လိုက်ပါ တစ်နေ့ 3ခါလုပ်ပေးပါ တစ်ခါအုံရင် 15မိနစ်ကြာအောင်ရျူပေးပါ ဆောင်နဲ့ခြုံပီးရျူပါ သုံးရက်အတွင်း အငွေ့တွေပြန်ရလာပါမယ် သောက်တဲ့ဆေးလဲတင်ပေးထားပါတယ် တစ်နေ့ကို ဆေးပုံမှန် သုံးခါ သောက်ပေးပါ မနက် နေ့လည် ည ဗီတာမင်ကတော့ တစ်နေ့နှစ်ခါပဲသောက်တာ မနက်နဲ့ည မနက်ပိုင်း နေပူထဲလန်းနေပါ 1နာရီလောက် ပူပါစေ လန်းပီးနေလိုက် ချွေးတွေတပျန်းပျန်းထွက်လေပိုကောင်းလေပဲ ရောဂါသက်သာလာမြန်တယ်နော် ရေနွေးဂျင်းရေ လောက်သေရွက်ရည် များများသောက်ပေးပါ ရေအေးလုံးဝမသောက်နဲ့လအယ်ယားကွင်းထဲလုံးဝမအိပ်နဲ့ ထမင်းစားမရရင် စားရတဲ့ဟာလေးတွေစားပါ ပေါင်မုန့်လေးစားပါ အားပြည့်အောင် ခွန်အားကောင်းအောင် ခွန်အားမကောင်းရင် ပိုဆိုးတတ်တယ် တစ်ပတ်အတွင်း လုံးဝပျောက်သွားတယ် စူးစူးနော်အားလုံး #Crd. .Mal Ree Ree. အနံ့မရတဲ့သူေတြအတြက္ မၽွေဝေပးခ်င္တယ္ေနာ္ … Read more
မြန်မာ့နည်းဖြင့်မြေကြီးအောက်တွင် ရေရှိ မရှိ ရေနီး မနီး ကွမ်းရွှက်ဖြင့်စမ်းသပ်တဲ့နည်း ရေသည် မရှိမဖြစ် အဓိကလိုအပ်ချက် ဖြစ်နေသောကြောင့် ရေကိုအမျိုးမျိုး ရှာဖွေနေကြပါသည်။ တောတောင် မြေပြန့် နေရာမလပ်အောင်ပင် လူတို့သည် ရေကိုရရှိအောင် ကြိုးစားလျက်ရှိကြပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသများ၊ မြို့ပြနေရာများတွင်လည်း ရိုးရာပညာ၊ ခေတ်မီစက်ကိရိယာများဖြင့် လက်ရိုက်တွင်းများ၊ အဝီစိတွင်း များ စသည်ဖြင့်စမ်းသပ်ရှာဖွေနေကြရာတွင် တချို့လည်း အောင်မြင်၍ တချို့လည်း မအောင်မြင်ဘဲ ရှိကြပါသည်။ ထိုသို့ အဖြစ်အပျက်များကို စာရေးသူကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရသောကြောင့် လက်တွေ့အောင်မြင်သော ရေရှိရာ နေရာ၊ ပေအနက် စသည်ဖြင့် တိကျစွာ ရေရှိ-မရှိစမ်းသပ်သည့် မြန်မာ့ရိုးရာ နည်းပညာကို ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒောဘာသ၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့၊ မဟာသိမ်တော်ကျောင်း သာသနာပြု ဆရာတော်ကြီး၏ခြေတော်ရင်းတွင် ပညာဆည်းပူးရင်း သရက်တောကျောင်း ရေတွင်း၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံ … Read more
ဘုရားပန်း ကပ်လှူရာတွင် မသိလိုက်သော အန္တရယ် အဆိပ်ပန်းများ
ဘုရားပန်း ကပ်လှူရာတွင် မသိလိုက်သော အန္တရယ် အဆိပ်ပန်းများ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ လူမျိုးများ ဘုရားပန်းကပ်ရာတွင် ပန်းလေး ကပ်လှူရာတွင် ကုသိုလိ ရဖို့ မိမိနေအိမ်ရှိ ဘုရားကျောင်ဆောင်လေး သန့်ရှင်းသက်ရပ်လှပနေစေဖို့အတွက် ဘုရားပန်းများကပ်လှူကြပါသည်။ ထိုသို့ကပ် လှူရာတွင် မိမိမွေးနံနဲ့ မတည့်သော ပန်းများ အကြောင်းကို လူတိုင်းမသိလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော် သိသလောက် တက်သလောက်လေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီပညာဟာလည်း ဆရာတစ်ယောက်ဓာတ်ဆင်ပုံကိုဉာဏ်ဖွင့်ပေးလိုက်မှ ကျွန်တော်မြင်တဲ့ ပညာရပ်တစ်ခုပါ။ ကဲ့စပြောပြီနော် ဗေဒင် ပညာတွင်ဦးညို /ခေမာ/သုတ / ဝေရီဆိုသော ကမ ္ဘာဓာတ်ရန် ကိုလည်း သိမှာပါ။ ဦးညို – ဦး =တနင်္ဂနွေ ၊ ညို = အင်္ဂါ အငျ်ဂါ သာသးမီးက အုနျးပနျးကိုမလှူသငျ့ပါ။ … Read more
ကွမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လက်စွဲထားသင့်တဲ့ ကျောက်ကပ် ကျောက်ကြေ ဆေးနည်း
ကွမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လက်စွဲထားသင့်တဲ့ ကျောက်ကပ် ကျောက်ကြေ ဆေးနည်း ကွမ်းယာစားသူရော ကွမ်းဟာမစားသူတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆေးနည်းလေး ပြန်လည်မျှဝေပါရစေ။ ကိုယ်တွေ့ပျောက်ကင်းသူရဲ့ ပြောပြချက်အရ ဆေးနည်းကကောင်းတယ် ဆေးအနေနဲ့က လွယ်ကူတယ်။ စစ်ကိုင်းမြို့ရွာထောင်မီးရထားရပ်ကွက်က ကိုစိုးပိုင်ဆံသ ဆိုရင် မသိသူ နည်းပါးပါမယ် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဗမာဆေးကို တစိုက်မတ်မတ်ဖော်စပ်နေသူတစ်ဦးပါ။ ဆေးဝါးကုသတာ ဝါသနာထုံသူမို့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်သူ ကိုကျော်သူရဲ့ကိုယ်တွေ့ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းမှ ခံစားခံရတဲ့ဒုက္ခကနေ သက်သာခဲ့တဲ့ဆေးနည်းလေး လာရောက်မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ခံံတက်ခေါက်နှင့်ဗမာသံပုရာသီးအစစ် ကို အရည်ညှစ်ပြီး စတီးဇွန်း တစ်ဇွန်းစာသွေးသောက်ပါ ဆီးကနေ … ! ကျောက် ကြွေကျလာတာ၃လုံးခန် ရကြောင်း အကြီးဆုံးကျောက်ကို ဆေးနည်းပြောရအောင် သိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ခံတက်ပင် ဖတ်လျှင် ဂဒတ်ပင်ဟုအသံထွက်ပါတယ်။ ခံတက်ချဉ်တို့စရာအဖြစ် လူသိများပါတယ်။ အပင်အမျိူးအစားမှာ အပင်ကြီးမျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီးအရွက်မှာ ရာဘာရွက်နှင့်အတော်တူပါတယ် … Read more